आज जेठ २२ गते राशिअनुसारको प्रत्यकको भाग्यफल - Muldhar Post
दैनिक राशिफल २०७७, २२ जेष्ठ बिहीबार
आज मिति २०७७ जेठ महिनाको २२ गते बिहिवार रहेको छ । अंग्रेजीपात्रोअनुसार २०२० जुन ४ तारिख रहेको छ । मेष ( च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, अ, आ ) तपाईंहरू कतिजना देरीसम्म ओवरटाइम काम गरिरहनुभएको छ र आफ्नो शक्ति पनि कम हुँदै गइरहेको छ – आज तपाईंले चाहेको अन्तिम कुरा तनाउ र दुविधाको एक दिन हो। आफन्त / मित्रहरू अद्भुत साँझको लागि आउन सक्छन्। आज प्रेम नभएको महसुस हुन सक्छ। आफ्नो घरमा आफ्नो मालिक र वरिष्ठहरूलाई निमन्त्रण गर्ने राम्रो दिन होइन। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंलाई र तपाईंको जोडीलाई साँच्चै नै आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि केही ठाउँ आवश्यक छ।
वृष ( ई, उ, ए, ऐ, ओ, व, वा, वो, वे, वौ, वं ) तपाईंले परिस्थितिलाई जित्नु भयो भने पीर हराउनेछ। तपाईंले यसलाई साहसको पहिलो स्पर्शमा फुट्ने साबुनको फोकाजस्तो हो भनेर बुझ्ने सम्भावना छ। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। तपाईंको खर्चिलो जीवनशैलीले घरमा तनाउ उत्पन्न गराउँछ, त्यसैले धेरै रातसम्म बाहिर बस्ने र अरूलाई धेरै खर्च गर्नबाट जोगिनुहोस्। आज कोही तपाईंको प्रेम बीच आउन सक्छ। आज तपाईंले काममा राम्रो महसुस गर्नु हुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कठिन चरण पछि यस दिन निवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
मिथुन ( क, का, की, कू, के, को, कौ, छ, ह, हा, छा ) राम्रो जीवनको लागि आफ्नो स्वास्थ्य र समग्र व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। आजको दिन नजिकका आफन्त वा साथीहरूले राम्रो समाचार दिएबाट सुरु हुनेछ। आज तपाईंलाई प्रेमले बाँध्नेछ। यसको परम आनन्द महसुस गर्नुहोस्। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ। यो आफ्ना जोडीसित तपाईंको रमाइलो दिन हुनेछ।
कर्कट ( हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, ड़, डे, डो ) अरूको आवश्यकता तपाईंको इच्छासँग तपाईंलाई हेरचाह गर्न हस्तक्षेप गर्नेछ – आफ्ना भावनाहरू नरोक्नुहोस् र आराम गर्नको लागि तपाईंले चाहेका कुराहरू गर्नुहोस्। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। आफ्नो प्रियसँग सानो छुट्टी मनाइरहेकाहरूको लागि अत्यधिक स्मरणीय समय हुनेछ। आज तपाईंले आफुले राम्रो काम गरिरहेको आफ्ना परिवारको समर्थनले हो भन्ने कुराको महसुस गर्नु हुनेछ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
शिंह ( म, मा, मी, मू, मे, मो, मौ, मं, ट, टा, टी़, टू, टो ) दिन व्यस्त भए तापनि स्वास्थ्य ठीक रहनेछ। “आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्।” यदि सञ्चार र छलफलहरू राम्रो तरीकाले भएनन् भने – तपाईंले रीस उठेर पछि पछुताउनु पर्ने कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ – केही बोल्नु अघि राम्ररी सोच्नुहोस्। आज तपाईंको धडकन आफ्नो साथीको प्रेमको संगीत तालमा लीन हुनेछ। तपाईंका साझेदारहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार काम गरेनन् भने आहत हुनु आवश्यक छैन ।
कन्या ( पा, प, पु, पं, प, पे, पो, पौ, टो ) तपाईंमा धार्मिक भावना उत्पन्न हुनेछ जसले गर्दा तपाईंलाई साधु-संतहरूबाट केही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गर्न धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्ने मन लाग्नेछ। आफ्ना बच्चाको एउटा पुरस्कार समारोहमा निमन्त्रणा गरिएकोमा तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ। तपाईंले आशा गरे झैं उसले उन्नति गरेकोमा तपाईंको सपना साँचो भएको पाउनु हुनेछ। तपाईंकी प्रिया केही रिसाएको जस्तो हुनेछिन् जसले तपाईंलाई दबाब थपिनेछ। आफ्नो जोडीको जरुरी कामले गर्दा तपाईंको दिनको योजना बिग्रिन सक्छ, तर अन्तमा तपाईंले यो राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
तुला ( र, रा, री, रु, रे, रो, रं, ता, त, तू, ते, तो, ती ) तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। वित्तीय अवरोधबाट बच्नको लागि आफ्नो बजेट हेर्नुहोस्। आमाबाबु र मित्रले तपाईंलाई खुसी राख्न आफुले सकेसम्म गर्नेछन्। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। कसैको व्यावसायिक प्रगति हुनेछ। आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ।
वृश्चिक ( न, ना, नी, नु, ने, नो, नै, नं, या, यी, यू, य ) हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। तपाईंको प्रिय रोमान्टिक मुडमा हुनेछन्। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।
धनु ( ये, यो, ध, धा, धी, धू, धे, फ, भा, भी, भू, भे ) स्वभावको चटारोले तर्क र टकराव उत्पन्न गराउन सक्छ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। अनावश्यक अरूको दोष खोज्ने तपाईको बानीलाई आफन्तहरूले आलोचना गर्नेछन्। यो समयको बर्बादी मात्र हो भन्ने तपाईंले बुझ्नु पर्नेछ। तपाईंले यसबाट केहि पाउनु हुनेछैन। आफ्नो बानी परिवर्तन गर्नु उचित हुनेछ। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। यो तपाईंका सम्पूर्ण वैवाहिक जीवनको न्यानो दिन रहेको छ।
मकर ( भो, ज, जा, जी, जे, जो, जै, जं, ख, खी, खू, खो, ग, गा,गी ) तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। परिवारको वातावरण बिग्रिन्छ। आज प्रेममा आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। काममा आज सबै कुरा तपाईंको पक्षमा देखिन्छ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज सबै खुसी देखिन्छ।
कुंभ ( गु, गे, गो, स, सा, सी, सु, से, सं, सो, सौ, द, दा ) तपाईंलाई आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्न सक्छ – तपाईंको असामान्य व्यवहारले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई भ्रममा पार्नेछ र तपाईंलाई निराश नै छोडिदिन्छन्। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। कार्यालयको काममा धेरै संलग्न भएकोले आफ्नो जोडी/पत्नीसँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुनेछ। कामको समयमा कसैले तपाईँको योजना बिगार्ने प्रयास गर्न सक्छ – त्यसैले तपाईंले वरिपरि के भइरहेको छ भनेर सावधान हुनु आवश्यक छ। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कठिन चरण पछि यस दिन निवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
मीन ( दि, दू, झं, थ, था, दे, दो, च, चा, ची ) तपाईंको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्ने कुरामा काम गर्ने लाभदायी दिन। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। साथीहरूसँगका गतिविधिहरु रमाइला हुनेछन् – तर खर्च नगर्नुहोस् – अन्यथा तपाईं खाली हात घर पुग्नु हुनेछ। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। कुनै पनि साझेदारी गर्नु अघि आफ्नो भित्री भावनालाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।